वरपर कोही मानिस थिएनन्।मेरो मुख बन्द गरेर उनले मेराे लुगा फुकालेर पछाडी छिराएपछि… (भिडियाे सहित) – Sidha Post 24
वरपर कोही मानिस थिएनन्।मेरो मुख बन्द गरेर उनले मेराे लुगा फुकालेर पछाडी छिराएपछि… (भिडियाे सहित)
बैतडी । गत मंसिरको कुरा हो । त्यो दिन आमा घास लिन जानुभएको थियो। बा काम गर्न स्वर (पिथौरागढ,भारत) गएका थिए । भर्खरै मन्दिरबाट फर्केर घरमा एक्लै बसिरहेको बेला खडक सर आए ।
जसले मलाई एक कक्षादेखि आठ कक्षासम्म पढाएका थिए । मैले तल्लो घरमा जाने तयारी गर्दैगर्दा उनले मलाई च्या’प्प समते ।वरपर कोही मानिस थिएनन् । मेरो मुख बन्द गरेर उनले लुगा फुकाल्न थाले ।
म केही बोल्न सकिन् । अप्रत्यासित रुपमा यसो भइरहँदा जोर जोरले चिच्याउन खोजेकी थिए । तर मुख बन्द थियो । आवाज नै निस्केन् । जबरजस्ती गरेर उनि फर्किए । म एकछिन बे’हो’स’जस्तै भए । उठ्नै सकिन । निकै पीडा भइरहेको थियो । साँझ आमा घरमा आउनुभयो तर दिउँसोको कुरा भन्ने आँट नै आएन् । म चुपचाप बसे ।
त्यसपछि खडक सरले अर्का राम सरलाई त्यो कुरा भनेछन् । अर्को त्यस्तै हर्कत राम सरले गरे । यि दुई जनाले म माथि जबरजस्ती गरे । कुनै दिन खडक, कुनै दिन राम विद्यालयबाट फर्किदा सँगै सँगै आउथे र मौका मिल्ने बित्तिकै क’र’णी गर्थे । गाउँमा पनि यी दुई जना मुख्खेराठ हुन् । मुख्खे भनेका उसैपनि गाउँमा ठूला मान्छे भनेर चिनिन्छन् ।
घरमा आमालाई भन्छु भनेर धेरै दिन सोचे । तर भन्न सकिन् । त्यसको केही महिनापछि थाहा भयो । पेटमा बच्चा बसिसकेछ । अब म सँग दुई वटा विकल्प मात्र थिए । के त देह त्याग गर्ने वा घर छोडेर जाने ।
धेरै दिनसम्म मनमा यस्तै सोच आइरह्यो । अन्ततः ‘म’र्नु’भन्दा बौ’ला’उनु बेस’ भनेझैं छिमेकी गाउँको केटासँग भा’गे’र गए । उ सँग पहिलेदेखि नै चीनजान थियो । उसले पनि लग्छु भनेपछि फागुनमा भा’गे’र उसको घर गए ।
पेटमा बच्चा रहेको कुरा कसैलाई थाहा थिएन् । केही महिना सबै कुरा ठिकठाकै चल्यो । जब भदौंमा छोरी जन्माए । गाउँघरमा ह’ल्ली-ख’ल्ली भयो । किनकी बिहे गरेको छ महिना मात्रै भएको थियो ।
कस्को बच्चा हो भनेर घरमा सोधखोज हुन थाल्यो । त्यसपछि बाध्य भएर ति शिक्षक र वडा कार्यालयका कर्मचारीबारे मुख खोल्नैपर्ने अवस्था आयो । छिमेकी जिल्ला गएर काम गर्ने लोग्ने पनि घर फर्किए । यो बेला के गर्ने के नगर्ने सोच्नै सकेकी छैन् ।
तर म एक्लै के गरु ? गाउँ भन्दा बाहिर कही गएकी छैन् । के गर्नेुपर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन् । मनमा त लागिरहेको छ कि आज म माथि त्यस्तो गर्नेहरुले भोली अरुलाई पनि नगर्लान र ?
यो पाँच, छ महिनाको अवधीमा उनिहरुले त्यस्तै किसिमका अरु ५, ६ वटा घटना गरिसकेको सुन्नमा आएको छ । एउटाले गरेपछि अर्कोलाई भि’डा’ईदिने । अर्कोले अर्कोलाई गरेर महिलाहरुलाई नै गलत प्रमाणित गर्ने गरेका छन् भन्ने सुन्छु ।
अहँ वास्ता नै गरेनन् । मेरो गल्ती यति थियो कि म माथि भएको अन्यायबारे समयमै भन्न सकिन । अहिले आमा बुवाको मात्रै होइन, समाजको पनि घृ/णाको पात्र भएकी छु । कसैले फोनमा सोध्यो भने ठिकै छ, केही गाह्रो छैन भन्नु भनेका छन् ।
गाउँका जान्ने बुझ्नेले नै यसो भन्नु भनेपछि अहिले सबैसँग फोनमा त्यही भन्दै आएकी छु । यस्तो अवस्थामा म के गरु ?(महेन्द्रनगरपोष्टवाट साभार गरिएको यो समाचार बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा भएको घटनाको हो) तस्विर फाइल
उमेर पुगेकाले मात्रै खोल्नुहोला, भर्खरै लिक भएको झापाली काण्ड (भिडियो सहित)